စမ်းသပ်မှု, သရုပ်ပြ, သုတေသန, မော်ဒယ်နှင့်စုဆောင်းခြင်း: သိပ္ပံတရားမျှတသောစီမံကိန်းငါးခုအဓိကမျိုးရှိပါတယ်။ ဒါဟာရှေးခယျြဖို့ပိုမိုလွယ်ကူမယ့် စီမံကိန်းစိတ်ကူး သင်စိတ်ဝင်စားစီမံကိန်း၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုဆုံးဖြတ်ထားပြီးပြီတစ်ကြိမ်။ ဤစာရင်းတွင်သိပ္ပံပညာ၏ငါးအမျိုးအစားများကိုဖော်ပြထားတယ် တရားမျှတစီမံကိန်းများကို ။
သိပ္ပံစီမံကိန်းများကိုများသောအားဖြင့်မိဘ, ဆရာ, ဆရာမများနှင့်အခြားလူကြီးများထံမှအကူအညီပါဝငျသညျ။ Images ကိုရောနှောနေခြင်း - KidStock, Getty Images
ဤသည်ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်အဘယ်မှာရှိစီမံကိနျး၏အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည် သိပ္ပံနည်းကျနည်းလမ်း တစ်ဦးအယူအဆအဆိုပြုနှင့်စမ်းသပ်ဖို့။ သင်ယူဆချက်ကိုလက်ခံရန်သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ပြီးနောက်သင်သတိပြုမိသောအရာကိုအကြောင်းကိုကောက်ချက်ဆွဲပါ။
ဥပမာ: တစ်သီးနှံ box ကိုအပေါ်ဖော်ပြထားသောအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နှုန်းသံပမာဏကိုပါရှိသည်ဖြစ်စေမကိုစူးစမ်း။
ဖော့စဖိတ်ကြားခံဇီဝနည်းပညာသို့မဟုတ်ဇီဝဗေဒဓာတ်ခွဲခန်း protocols များအတွက်အထူးအသုံးဝင်သည်။ အင်ဒရူး Brookes / Getty Images
တစ်ဦးကသရုပ်ပြများသောအားဖြင့်ပြန်လည်စမ်းသပ်တစ်ခုကပါဝင်ပတ်သက် စမ်းသပ်မှု ပြီးသားတစ်စုံတစ်ဦးအားဖြင့်ပြုသောအမှုထားပြီးကြောင်း။ သငျသညျစာအုပ်တွေထဲကနေနှင့်အင်တာနက်အပေါ်စီမံကိန်း၏ဒီ type များအတွက်အကြံဥာဏ်များကိုရရှိနိုင်သည်။
ဥပမာ: တစ်ခုတင်ပြခြင်းနှင့်ရှင်းပြ လှိုနာရီ ဓာတုတုံ့ပြန်မှု။ သင်သရုပ်ပြပြုပါ, ပြီးတော့နောက်ထပ်သွားလျှင်စီမံကိန်းကိုဤအမျိုးအစားထိုကဲ့သို့သောအပူချိန်နာရီတုံ့ပြန်မှုနှုန်းကိုထိခိုက်စေလိမ့်မည်ဟုဘယ်လောက်ခန့်မှန်းအားဖြင့်အမျှတိုးတက်နိုင်ပါတယ်သတိပြုပါ။
ပူဖောင်းအပူချိန်သိပ္ပံတရားမျှတသောစီမံကိန်းပိုစတာ။ ပိုမိုနှစ်သက်ပိုစတာ layout ကိုတခုရဲ့ဥပမာ။ Todd Helmenstine
ဥပမာ: သင်တစ်ဦးမေးခွန်းကိုဖြေဖို့ဒေတာကိုသုံးပါလျှင်တစ်ဦးကသုတေသနစီမံကိန်းအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စီမံကိန်းကိုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာတစ်ခု thier ယုံကြည်ချက်နှင့် ပတ်သက်. မေးရန်မဲရုံလူဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟု ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုအတွက် ထို့နောက်ရလဒ်မူဝါဒနှင့်သုတေသနတို့အတွက်အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုအကြောင်းကိုကောက်ချက်ဆွဲ။
Grete Kask နည်းပညာတက္ကသိုလ်တဲလင်းမြို့ကတက္ကသိုလ်မှာအော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒပညာရှင်။ Wikimedia Commons ကနေတဆင့်အလုပျသ Bilovitskiy (ကိုယ်ပိုင်အလုပ်) [BY-SA 4.0 CC ကို] အားဖြင့်
ဥပမာ: ဟုတ်ကဲ့, တစ်ပုံစံများထဲမှဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည် ရှာလကာရည် & မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါမီးတောင် , သင်မူကားအသစ်တခုဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်တစ်ဦးတီထွင်မှုများအတွက်ရှေ့ပြေးပုံစံတစ်ခုမော်ဒယ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်မြင့်မားသောကျောင်းသို့မဟုတ်ကောလိပ်စီမံကိန်းကိုရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်း၏အကောင်းဆုံးပုံစံများတွင်တစ်မော်ဒယ်နှင့်အတူစီမံကိန်းအသစ်တစ်ခုကို concept ကိုဖော်ပြသည်။
Images ကိုရောနှောနေခြင်း - KidStock / Getty Images
ဥပမာ: ဆန္ဒပြပွဲ, မော်ဒယ်နှင့်သုတေသနစီမံကိန်းကိုနှင့်အတူအမျှတစ်ဦးစုဆောင်းမှုတစ်ဦးခြေဆွံ့စီမံကိန်းကိုသို့မဟုတ်တစ်ခုခြွင်းချက်စီမံကိန်းကိုဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိပါတယ်။ သင်သည်သင်၏လိပ်ပြာစုဆောင်းခြင်းကိုချွတ်ပြသနိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်မည်သည့်ဆုအနိုင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သင်သည်သင်၏လိပ်ပြာစုဆောင်းခြင်းကိုချွတ်ပြပါနှင့်အင်းဆက်ပိုးမွှား၏တောင်ပံအရှည်နှစ်တိုင်းကွဲပြားနှင့်ဖြစ်ရပ်ဆန်းဘို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ရှင်းလင်းချက်သို့ကြည့်ရှုပုံကိုစောငျ့ရှောကျနိုငျတယျ။ ပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲခြင်းသို့မဟုတ်အပူချိန်သို့မဟုတ်မိုးရွာသွန်းမှုနှင့်အတူဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခြင်းအရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ငါအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုမြင်ကြသည်မဟုတ်လော
ကယ်လ်ဆီယမ်ကြေးနီ Acetate Hexahydrate crystal ဟာတိုးတက်ကြီးပွားစေရန်ဘယ်လို
အပြာရောင်ကြေးနီ sulfate crystal ဟာတစ် Geode ကို Make ရန်ကဘယ်လို
တစ်ဦး Bottle သစမ်းသပ်မှုအတွက်ကို Magic Genie
ဘယ်လိုမမြင်နိုင်သောမှင် Make မှ - Cornstarch
သင်၏အကင်အသုံးပြုခြင်း Glass ကို Make လုပ်နည်း
အဆိုပါ Flame ဟာစမ်းသပ်မှုလုပ်ပါဖို့ကိုဘယ်လို
သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နှင်းကမ္ဘာလုံး Make လုပ်နည်း
အဝါရောင်သို့မဟုတ်ရွှေမီးသတ် Make လုပ်နည်း
နောကျဆကျတှဲတကယ်ပဲလူသားတွေဟာတစ်ဦး Vestigial ဖွဲ့စည်းပုံလား?
အဘယ်မှာရှိ Build သလော
အဆိုပါ Element တွေကို၏ပရင့်ထုတ်ရန်အအရောင် Periodic ဇယား
သူတို့၏ဘုရားအဘို့အ Voodoo သင်္ကေတ
သင့်ရဲ့စာဖတ်ခြင်းကနေမှတ်စုများရိုက်ယူခြင်းများအတွက် 8 သိကောင်းစရာများ
ပြင်သစ်နှင့်အိန္ဒိယစစ်ပွဲ: ဝိန်း Fort ဝီလျံဟင်နရီ၏ Siege
အမေရိကန်ဆီးနိတ်လွှတ်တော်အတွက် Filibuster ဆိုတာဘာလဲ
အဘယ်အရာကိုဆောင်းရာသီတောင်စက်ဘီးစီး Wear မှ
ကျေးဇူးတုံ့ပြန်အပျော်ရွှင်ဆုံးတစ်နှစ်တာ၏နေ့ (နှင့်အခြားအချက်အလက်) ဖြစ်ပါသည်အဘယ်ကြောင့်
အပေါများဆုံး Element ကိုဆိုတာဘာလဲ
7 ကွန်ယက်ရုပ်မြင်သံကြားက Black အမျိုးသမီးများနေ့ Starring ဖော်ပြပေး
"ငါသည် Breaking မှစ. တစ်ခုမှာနှလုံးသားရပ်တန့်နိုင်သလားဆိုပါက": အမ်မလီ Dickinson နားလည်ခြင်း
ဇွန်လ Themes, အားလပ်ရက်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်မူလတန်းကျောင်းသားများအဘို့ပွဲများ
အရည်အသွေးမူကွဲ (IQV) ၏အညွှန်းကိန်း
တစ်ရိုးရှင်းသောစီးပွားရေးပေးစာကို format နဲ့ရေးထားလုပ်နည်း
Wonderland ထဲမှာအဲလစ် (2010) - ဓာတ်ပုံများနှင့်ဇာတ်ကောင်
စံစမ်းသပ်ခြင်း၏အကောင်းအဆိုး cons ဆန်းစစ်ပါ
အဘယ်သူသည် '' နိုင်ငံခိုင်ခံ့သော '' ရုပ်ရှင်အသံကြောပေါ်အဘယ်အရာ Songs ရဲ့သီချင်းသီဆို?
အဘိဓါန်ပွငျသစျဘာသာစကားကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင် ( 'Moteurs က de Recherche')
ဖြားယောင်း Vs ဝါဒဖြန့်
အမေရိကန်တော်လှန်ရေး: ဗိုလ်မှူးရှမွေလသည်က Nicholas, USMC